Kay September 25, 2008 at 2:33 PM
အာ- သူငယ်တန်းမှာ..သူက..ပထမ ရတယ်ကွာ- အီစကိုက..ဒုပဲရတယ်.. တေက်..နာတယ်..တမှတ်ကြောသွားတယ်။ ပြန်ပြိုင်မယ်- သူငယ်တန်းစာ နဲ့။
nu-san September 25, 2008 at 8:05 PM
မသက်ဝေရေ... ပထမဆုံး ဖတ်ရသော စာအုပ်မှာ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးလို့ပါတယ်နော်.. ကျနော်လည်း အဲဒီစာအုပ်ပဲ ဖတ်ခဲ့ဖူးတာ မှတ်မိနေသေးတယ်.. ကျန်တာတွေကတော့ ၀ါးတားတားပါပဲ မရေ.. ကြိုးစားရေးကြည့်မယ်နော်.. ပထမဆုံးများဆိုတော့ အများကြီးပဲပေါ့.. အင်း.. လာမယ်ကြာမယ်ပေါ့ အမရေ.. စိတ်ရှည်ရှည်လေးသာ စောင့်ပေးနော်.. :P
pandora September 25, 2008 at 8:15 PM
မသက်ဝေ ပထမဆုံးကြည့်မိတာ ပန်ဒိုရာ့ဘလော့ဆိုတော့ မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။
အမာခံပရိဿတ်ကို လက်ဆောင်တွေ ပေးဦးမှပါပဲ။
ဇနိ September 25, 2008 at 9:35 PM
Yu Wa Yi September 26, 2008 at 6:26 AM
Tag တယ်ဆိုလို့ အပြေးရောက်လာတာပါ ဒေါ်သက်ဝေရေ။ ရေးပေးဖို့ ရာ memory ကို
ပြန်ခေါ်လိုက်ဦးမယ်နော်။ သတိတရ tag ခြင်းကို ကျေးဇူးတင်မိကြောင်းပါ။
စကားမစပ် မသက်ဝေ သူငယ်တန်းတုန်းကရခဲ့တဲ့ ပထမဆုက ဘယ်အတန်းအတွက်လဲ
ဟင်။ မူကြိုအတွက်ဖြစ်ရမှာ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ သူငယ်တန်းမှာ ပထမရရင် တစ်တန်း
ရောက်မှ ဆုပေးပွဲတက်ရတာလေ။ ချက်ချင်း တန်းပေးလိုက်တာမျိုးတော့ကြားဖူးသေးဘူး။
အဟဲ ခင်လို့ စတာနော်။ မသိချင်ဟန်ဆောင်ပြီးမေးနေတာ.။
အောင်သာငယ် September 26, 2008 at 10:54 AM
သက်ဝေရေ ရေးပေးတာ ကျေးကျေးပါနော်
မရေးပေးလည်း ဟိုသေနတ်နဲ့ မပစ်ပါဘူး၊
အဲ သေနတ်က အဘတို့ကို ပစ်ဖို့
နောက်ဆက်တွဲကို စောင့်နေမယ်း)
တန်ခူး September 27, 2008 at 9:54 AM
သက်ဝေရဲ့ ပထမဆုံးရင်းနှီးရတဲ့ ဘလော့ဂါဖြစ်ရလို့အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာမိတယ်… တို့ လဲ တူတူပဲ… တို့ ကတော့ သက်ဝေက တို့ သူငယ်ချင်း တယောက်ယောက်များ ဖြစ်နေမလားလို့ထင်နေတုန်းပဲ… ပထမဆုံးနောက်ဆက်တွဲတွေလဲ မျှော်နေမယ်နော်…
myatnoe September 27, 2008 at 5:12 PM
ama, i cannot see anything ,coz no myanmar font in here.
Plz understand to me. I cannot write that u tag to me.
sonata-cantata September 27, 2008 at 10:37 PM
မပြည့်မစုံမို့ စိတ်ဆိုးနဲ့နော်။ (အသက်က စကားပြောပြီလေ)
လင်း September 29, 2008 at 5:43 PM
ပထမဆုံး ရည်းစားနာမည် ကျန်ခဲ့တယ်။ :P
myatnoe October 2, 2008 at 8:46 PM
Moe Cho Thinn October 3, 2008 at 3:49 AM
ပထမဆုံးချက်ဖူးတာ ကန်စွန်းရွက်နဲ့ မှိုကြော်တဲ့။ မျက်လုံးမှေးပြီး ပုံဖော်ကြည့်သွားတယ်။ မဆိုးဘူး။ ညနေကျရင် ကြော်စားမယ်။
ပထမဆုံးစီးဖူးတဲ့ ဘတ်စ်ကားကြီးလဲ တူသွားပြီ။
သက်ဝေ October 28, 2008 at 9:58 AM
ကေ... စာတွေမေ့ကုန်ပြီ ကေရဲ့ .. ပြီးတော့ တို့ တွေ ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ရတဲ့ စာတွေနဲ့ လဲ မတူတော့ပြီလေ..။
နုရေ... နုရေးထားတာလေးကို ဖတ်ပြီးပါပြီ၊
စိတ်ဝင်စားစရာလေး... မအားတဲ့ကြားက ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
ပန်ပန်... ယုံဘူးလား... တကယ်ပြောတာပါ...။ ဒါနဲ့စကားမစပ်... လက်ဆောင်ဆို... ဘယ်မှာလဲ... ဟီးဟီး
ကိုဇနိ + မဇနိ... ရေးထားတာ ဖတ်ပြီးပါပြီ Tag ပြီး တစ်လလောက်နေမှ Comment ပြန်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို စိတ်မရှိကြပါနဲ့ နော်...။ ရေးပေးတာ ကျေးဇူးအထူးပါ။
ရီ... ပျောက်နေတာ တော်တော်ကြာ... စာမေးပွဲ ဖြေနိုင်ရဲ့ လား..
အကိုကြီး ကိုအောင်သာ... ဒါဆိုရင် တော်သေးတာပေါ့နော်...။ မီးမီးက ကြောက်နေတာ... ဟီးဟီး..
တန်ခူးရေ... အင်း.. ဖြစ်နိုင်တာပေါ့... သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်။ စက်မှု တစ်ကျောင်းတည်းထွက်တွေဘဲ...။ :-P
မြတ်နိုးလေး... အိုကေ... အိုကေ...။ ရေးထားတာလဲ ဖတ်ပြီးပါပြီ...။ နှိုင်းမတုလောက်အောင် သိုင်းခရုပါနော်...။
မသီတာ... ဘယ်နှယ့်ကြောင့် စိတ်ဆိုးရမှာလဲ ရေးပေးတာကို ကျေးဇူးတွေတင်နေသေးတာ...။ အသက်.. အင်း.. တော်တော်တော့ကြီးနေကြပြီနော်...။
လင်း... တစ်ယောက်ထဲလားမေးတော့... ဒီတစ်ယောက်ထဲပါ... ယုံနော်... ဂယ်ပါ ဂယ်ပါ...။
ချိုသင်း... မှို ကန်ဇွန်း ကြော်စားပြီးပြီလား...။